Muuqaal laga arkayo Ciidanka Kenya ee KDF oo qof Soomaali ah oo rayid ah tooganaya oo soo baxay | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Muuqaal laga arkayo Ciidanka Kenya ee KDF oo qof Soomaali ah oo...
Muuqaal laga arkayo Ciidanka Kenya ee KDF oo qof Soomaali ah oo rayid ah tooganaya oo soo baxay
(Ceelwaaq) 06 Okt 2020 – Dadka ku dhaqan magaalada Ceelwaaq oo ku taalla xad beenaadka Somalia-Kenya ayaa beri dhowayd dhigay dibedbax ay uga cabanayeen tacaddiyo ay u gaystaan Ciidanka KDF ee Kenya oo dadka rayidka ah iska qafaasha kaddibna dila.
Waxay sheegeen, in Ciidanka Kenya ayaa diley qof rayid ah iyagoo qafaashay 3 kale oo ay kala bexeen guri ku yaalla agagaarka Yado oo u dhow Ceelwaaq.
Waxay markii dambe jidka soo dhigeen maydka mid ka mid ahaa 3-dii ay qafaasheen oo ay dileen.
Haatan waxaa soo baxay muuqaal kale, oo aynaan doonaynin inaan halkan ku faafinno xasaasiyadda niyadeed ee uu leeyahay dartii, oo muujinaya Ciidanka KDF oo xabado ku asqaysiinaya qof rayid ah oo xirxiran oo Soomaali ah, iyagoo dhowr askari ah kuna lebbisan tuutaha Ciidanka KDF.
Ciidamada KDF oo Somalia sharci darro asal ahaan kusoo galay, balse markii dambe AMISOM ku biiray ayaan marna bedelin hab-dhaqankoodu aan dishibiliinka iyo xirfadda lahayn, iyagoo aan marna raacin xeerarka u degsan nabad ilaalinta isla markaana tacaddiyo u gaysta shacabka iyo kaabayaasha dalka, waxaa intaa dheer faragelinta siyaasadeed ee ay ka wadaan gudaha.
Previous articleSiciid Deni oo codsaday in isaga laga dhigo ”geed fadhiga” siyaasiyiinta ku xiran Imaaraadka & Qorshaha
Next articleDF Somalia oo aan sidii ay mudnayd u wajihin tacsida Amiirkii Kuwayt oo ah dal wax wayn tara Somalia (Maxaadan ku baraarugsanayn?)